China UM-1010 / C / T _ 10.1 santimetatra mpanamboatra USB Monitor sy mpamatsy | Lilliput
12G-SDI talen'ny maso
Monitor an'ny talen'ny 4K
Amin'ny Monitor Camera
Security Monitor 7-16 ″
Fanaraha-maso trano fonenana 7-15 ″
Monitor tsy misy tariby
UM-1010 / C / T _ 10.1 santimetatra USB Monitor
Volavola azo loka izay atambatra ny fampiasana malefaka sy marobe ampiarahina amin'ny faharetana maharitra, ary ny fijery tsara… ity no takelaka finday takatry ny USB mora vidy indrindra sy mpanara-maso fakan-tsarimihetsika ambany indrindra eto an-tany. Manampia toerana birao ilaina miaraka amin'ity fitaovana plug-n-play mora vidy sy ara-toekarena ary azo entina ity.
Lilliput dia mpamokatra LCD Industrial Display hampiditra 10,1 touch Touchscreen LCD Industrial grade touch screen miaraka amina interface USB (miasa amin'ny Windows sy Mac OS) ary scaler namboarina. Fifandraisana USB tokana ihany no takiana mba hanomezana hery ny monitor 7 ″ ary hanomezana fampisehoana sy fampiasa touchscreen miaraka amin'ny PC. Ny singa fampirantiana kilasy indostrialy 10.1 incorpor dia mampiditra ny haitao farany tara-pahazavana LED ho an'ny famirapiratanana bebe kokoa ary manana sensor jiro manodidina izay manamaivana ny jiro aoriana rehefa ilaina. Ho fanampin'izany, ny Chip Monolithic Ceramic Capacitors dia ampiasaina na dia mivoaka ny singa hanatsarana ny fitoniana sy ny faharetana indrindra amin'ny toe-piainana mafana be.
Ity vokatra manavao ity dia mampiditra tontonana 4-tariby resistive Touch-Screen. Ampiasao ny efijery azo tsapain-tanana ho fitaovana ampidirina, fehezo ny kitondro totozy anao na ny mini eo amin'ny fitendry efijery izay miaraka amin'ny rafitra fiasanao. Ny efijery mikasika dia mampiasa ny port USB ho toy ny interface. Azonao atao ny mampifandray mpanara-maso 708TSU marobe amin'ny solosainao ary hiasa miaraka amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny multi-monitor ny touchscreens.
Modely: UM-1010 / C / T
Kitendry mikasika: resistive 4-tariby (tariby 5 ho an'ny safidy)
Asehoy: 10,1 santimetatra, 1024 × 600, 250nit
Mandefasa mailaka aminay Sintomy ho PDF Torolàlana ho an'ny mpampiasa
Fanamarihana: Ny UM-1010 / C tsy misy fiasan'ny fikasihana,
ny UM-1010 / C / T miaraka amin'ny fiasa mikasika.
Tariby iray no manao azy rehetra!
Fifandraisana USB-tsy misy afa-tsy manampy mpanara-maso raha tsy manampy korontana!
Fametrahana Monitor Driver (AutoRun);
Tsindrio ny sary fampisehoana fampisehoana eo amin'ny lozisialy sy jereo ny menio;
Menu fanamboarana ho an'ny famahana ny sary, ny loko, ny fihodinana ary ny fanitarana, sns.
Monitor Driver dia manohana OS: Windows 2000 / Windows XP (32bit 銆 64bit) / Windows Vista (32bit 銆 64bit) / Windows7 (32bit 銆 64bit) / Mac OS X
Inona no azonao atao amin'izany?
UM-1010 / C / T dia manana rindranasa mahasoa sy mahafinaritra an'arivony: tazomy maimaimpoana ny fampiroboroboana ny fampisehoana lehibe anao, apetraho ny varavarankely Instant Messaging anao, tazomy eo amboniny ny paletsanao apetrakao, ampiasao ho toy ny sary nomerika, ho toy ny fampisehoana tsinontsinoavina stock stock, apetraho eo amboniny ny sarintaninao.
UM-1010 / C / T dia tsara ampiasaina amin'ny solosaina finday kely na netbook noho ny lanjany maivana sy ny fifandraisana USB tokana, afaka mandeha miaraka amin'ny solosainanao izy, tsy mila biriky mahery intsony!
Track System Performance, Monitor Network Traffic, CPU cycle;
Asaivo mitsangana ny mpilalao haino aman-jery hifehezana ny fialamboly Fidirana haingana amin'ny boaty fitaovana ilaina amin'ny lalao an-tserasera Ampiasao ho fampisehoana faharoa ho an'ny solosaina mifamatotra amin'ny fahitalavitra Mihazara fampisehoana faha-2 na faha-3 nefa tsy mila karatra sary vaovao;
SKYPE / Google / MSN Chat raha mampiasa rindranasa efijery feno hafa Jereo ho an'ny namana ao amin'ny Facebook sy MySpace Tazomy hatrany ny mpanjifanao Twitter fa tsy eo amin'ny sehatry ny asanao lehibe;
Parko ny biraon'ny fampiharana Adobe Creative Suite na mifehy Powerpoint: tazomy amin'ny tabilao misaraka ny paleta fandokoana, ny loko sns.
Orinasa (Varotra antsinjarany, fikarakarana ara-pahasalamana, fitantanam-bola)
ampidirina amin'ny fizotry ny fividianana teboka-na-fividianana. Fomba mahomby amin'ny fampiasana mpanjifa / mpanjifa marobe misoratra anarana, mampiditra fampahalalana ary manamarina. Mampiasà solosaina iray ho an'ny mpampiasa marobe (miaraka amina rindrambaiko virtualization - tsy tafiditra);
Manaraka: UM-1012 / C / T _ 10.1 santimetatra USB Monitor misy mpandahateny
Kitendry mikasika 4-tariby resistive (5-tariby tsy voatery)
vahaolana 1024 x 600
ny famirapiratry ny mazava 250cd / m²
mifanohitra 500: 1
Mijery Angle 140 ° / 110 ° (H / V)
Hery miasa ≤6W
Temperature miasa -20 ℃ ~ 60 ℃
Temperature fitehirizana -30 ℃ ~ 70 ℃
Lafiny (LWD) 253.5 × 162.5 × 34/61 mm (miaraka amin'ny fononteny)
monit faharoa na
monitor usb miaraka amin'ny touch
UM-1012 / C / T _ 10.1 santimetatra USB Monitor misy mpandahateny
UMTC-1400 _ Monitor USB type-c 14 inci
Security Monitor 7-16 ”
No.26 Fu Qi North Road, Faritra fampandrosoana toekarena Lan Tian, ​​Zhang Zhou, Fu Jian, 363005, Sina
Lilliput , Lilliput Monitor , Sdi CCTV Monitor , 5 Inch 4k Camera Monitor , Usb Powered Monitor , monitor broadcast ,